“Vidéo” efa tamin’ny taona 2016: niteraka resabe ilay zandary namelaka tehamaina | NewsMada
Fantatra, araka ny fanadihadiana, natao teo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa efa tamin’ny taona 2016 ilay “vidéo” nivoka tao anaty facebook, afakomaly, mampiseho zandary iray namelaka tehamaina mpitondra moto, teny Mahazo. “Vidéo” nampiteraka resabe mila tsy hisy farany…
“Mba tena tsy rariny kosa e!”, “Aleo ataony any fa be famaliana”… Hatramin’ny afakomaly tolakandro, fotoana nivoahan’ilay “vidéo” tao anaty tambajotra sosialy facebook, nitohy omaly tontolo andro, efa nahatratra anarivony ny olona nahita sy nanao fanehoan-kevitra mikasika ilay tranga niseho teny Mahazo. Tranga izay nampifamaly ny tovolahy iray nitondra moto scooter sy zandary iray, ary niafara tamin’ny felaka tehamaina nataon’ity farany.
Ity horonantsary ity izay nomarihin’ny teo anivon’ny zandarimaria fa efa tamin’ny 2016 fa izao vao nisy nanaparitaka. Nanamafy ny teo anivon’ny fiadidiana ny zandarimaria fa tsy milefitra amin’ny zandary mikasi-tanana izy ireo ary tsy maintsy hisy ny sazy izay mahazo ny tompon’andraikitra amin’izany. Ankoatra izay, raha misy ny fitoriana napetrak’ilay voakasi-tanana, misokatra ny fanadihadiana any amin’ny fitsaràna. Tsy nisy anefa ny fitoriana nipetraka hatreto.
Voamarika tao anatin’ilay “video” kosa anefa fa nisy ny tsy fanajana mpitandro filaminana nataon’ilay lehilahy izay efa somary mamo. Andaniny, niteraka fahatezerana tamin’ilay zandary izany ary nitohy tamin’ny fikasihan-tanana. Saika nifanao totohondry ny roa tonta, fa nisy ny zandary hafa nanasaraka. Ny olona andaniny efa nitangorona. Toe-javatra mety tsy ho voafehy tampoka ireny mety hiteraka fitsaram-bahoaka, saingy nilamina ihany raha ny tohin’ny raharaha.
Ilana fitandremana ny facebook
Ilana fitandremana ny fampiasana tambajotra sosialy toy ny facebook. Raha ity omaly ity, efa taona maro lasa, kanefa izao vao miteraka resabe. Mifanandrify amin’ny toe-draharaha mafampana eto amin’ny firenena. Toy ny fanakorotanan-tsaina entina hanakorontanana ihany, na manome endrika fanehoan-kevitra ho an’ny olona aza. Mety hiteraka fankahalana mpitandro filaminana mantsy ny tranga toy ireny, ary izay mazàna no mahatonga fitsaram-bahoaka eto amintsika. Mila fandanjalajana ny fampiasana ny tambajotra sosialy, mety ho loza mitatao ho an’ny hafa.